Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.4.1.3 Sivana ny haino aman-jery sosialy avy amin'ny governemanta Shinoa
Mpikaroka ary norakofako haino aman-jery sosialy Shinoa toerana mba hianatra ny sivana. Izy ireo nanao tamin'ny incompleteness amin'ny miseho-toetra inference.
Ankoatra ny amin'ny angon-drakitra lehibe ampiasaina ao amin'ny roa teo aloha ohatra, ny mpikaroka koa hanangona ny observational tahirin-kevitra, araka izay aseho mahagaga ny Gary King, Jennifer Pan, ary Molly Roberts ' (2013) fikarohana momba ny sivana avy amin'ny governemanta Shinoa.
Haino aman-jery sosialy any Shina no Lahatsoratra sivana amin'ny alalan'ny fitaovana goavana panjakana izay heverina fa ahitana am-polony an'arivony ny olona. Mpikaroka sy ny olom-pirenena, na izany aza, dia manana heviny kely ny fomba manapa-kevitra ny mpanivana ireo izay afa-po tokony ho voafafa avy amin'ny haino aman-jery sosialy. Raha ny marina ny manam-pahaizana any Sina manana fanantenana mifanohitra momba izay karazana lahatsoratra tena mety hatao voafafa. Misy mihevitra fa ny sivana hifantoka amin'ny lahatsoratra izay mitsikera ny fanjakana raha ny hafa kosa mihevitra izy ireo hifantoka amin'ny lahatsoratra izay mamporisika iombonana fitondran-tena, toy ny hetsi-panoherana. Mahafantapantatra hoe izay ireo zavatra andrasana marina dia manana fiantraikany ho fomba mpikaroka sy ny hafa hahatakatra Shina fitondram-panjakana tsy refesi-mandidy izay anjara amin'ny sivana. Noho izany, Mpanjaka sy ny mpiara-miasa te hampitaha ny lahatsoratra izay efa navoaka ary taty aoriana voafafa ny lahatsoratra izay nivoaka ary tsy voafafa.
Nanangona ireo Lahatsoratra tafiditra ny mahavariana injeniera Feat ny mandady mihoatra ny haino aman-jery sosialy Shinoa 1000 vohikala-samy hafa pejy fandrindran-takila-nahita mifandraika lahatsoratra, ary avy eo dia niverina nitsidika azy ireo lahatsoratra hahita izay voafafa tatỳ aoriana. Ankoatry ny ara-dalàna injeniera olana goavana mifandray amin'ny tranonkala-mandady, ity tetikasa ity dia nanana ny zava-tsarotra koa fa ilaina ny ho tena mafy satria maro ireo lahatsoratra ireo nalaina an latsaky ny 24 ora. Amin'ny teny hafa, dia tsy mora crawler no malahelo be ny lahatsoratra izay sivana. Ankoatra izany, ny crawlers maintsy hanao izany rehetra izany fanangonana antontan'isa raha mamantatra fandrao Nandositra ny haino aman-jery sosialy vohikala hanakana ny fidirana, na raha tsy izany dia hanova ny politikany ho setrin'ny amin'ny fianarana.
Raha vao izany asa goavana vita injeniera, Mpanjaka sy ny mpiara-miasa efa nahazo ny 11 tapitrisa amin'ny 85 Lahatsoratra lohahevitra samihafa izay mialoha mazava ny nandrasana mifototra amin'ny fari-fahatsapana. , Ohatra, ny lohahevitra ny fahatsapana avo dia Ai Weiwei, ny mpanohitra artista; ny lohahevitra dia ny afovoany fahatsapana fankasitrahana sy devaluation ny Shinoa vola, ary ny lohahevitra ambany fahatsapana dia izao tontolo izao fiadiana ny amboara. Ireo 11 tapitrisa Lahatsoratra tokony ho 2 tapitrisa efa voasivana, fa tena saro-pady lahatsoratra amin'ny lohahevitra dia sivana kely fotsiny matetika kokoa noho ny lahatsoratra tao amin'ny afovoany sy ambany fahatsapana lohahevitra. Amin'ny teny hafa, dia momba ny sivana Shinoa tahaka ny mety hanivana ny lahatsoratra izay miresaka Ai Weiwei ho toy ny lahatsoratra izay miresaka ny fiadiana ny amboara eran. Ireo zavatra hita dia tsy hifanaraka amin'ny hevitra tsotra fa ny mpanao sivan'ny fitondrana lahatsoratra rehetra ao amin'ny lohahevitra saropady.
Io kajy tsotra ny sivana amin'ny lohahevitra ny tahan'ny mety ho mamitaka, na izany aza. Ohatra, ny governemanta hanivana lahatsoratra mety izay manohana an'i Ai Weiwei, fa hamela lahatsoratra izay no manakiana azy. Mba manavaka lahatsoratra kokoa amim-pitandremana, ny mpikaroka mila handrefesana ny fihetseham-po ny tsirairay lahatsoratra. Noho izany, fomba iray mba hieritreritra momba izany dia ny fihetseham-po ny tsirairay lahatsoratra amin'ny lafiny manan-danja ny tsirairay miseho lahatsoratra. Indrisy anefa, na dia teo aza ny asa be, feno fomba mandeha ho azy ny fihetseham-po tratra mampiasa fisiany mialoha rakibolana dia mbola tsy tena tsara amin'ny toe-javatra maro (mieritreritra ny olana famoronana-po fizotry ny Septambra 11, 2001 avy amin'ny Section 2.3.2.6). Noho izany, Mpanjaka sy ny mpiara-miasa nila fomba mba milaza ny 11 tapitrisa haino aman-jery sosialy lahatsoratra raha toa izy ireo 1) mitsikera ny fanjakana, 2) manohana ny fanjakana, na 3) tsy ilaina tena nisy tatitra momba ny zava-nitranga. Izany feo toy ny asa lehibe, fa voavaha izany mampiasa mahery fitaka; iray izay mahazatra amin'ny angon-drakitra amin'izao fotoana izao ny siansa, fa somary tsy fahita firy eo amin'ny siansa ara-tsosialy.
Voalohany, tao amin'ny dingana matetika antsoina hoe mialoha ny fanodinana, ny mpikaroka niova fo ny media sosialy tsimandoa ho any amin'ny antontan-taratasy-teny hoe teraka, ary nisy iray andalana isaky ny antontan-taratasy ary iray tsanganana izay ao na ny lahatsoratra ao voafaritra tsara ny teny (ohatra, hetsi-panoherana, fifamoivoizana, sns). Manaraka, vondrona mpanampy fikarohana tanana-misy soratra hoe ny fihetseham-po ny santionany ny lahatsoratra. Avy eo, Mpanjaka sy ny mpiara-miasa nampiasa izany tanana-misy soratra hoe tahirin-kevitra mba maminavina ny milina fianarana modely izay afaka infer ny fihetseham-po ny lahatsoratra mifototra amin'ny ny toetra. Farany, dia nampiasa milina io modely fianarana mba Tombanan'ny ny fihetseham-po rehetra 11 tapitrisa Lahatsoratra. Noho izany, fa tsy tanana mamaky sy fametahaka marika 11 tapitrisa Lahatsoratra (izay mety ho logistically mihitsy), dia tanana kely misy soratra hoe maro ny lahatsoratra, ary avy eo dia inona no angon-drakitra ampiasaina mpahay siansa no miantso nanara-maso ny fianarana mba Tombanan'ny ny sokajy rehetra ny lahatsoratra. Rehefa vita izany fanadihadiana, Mpanjaka sy ny mpiara-miasa dia afaka milaza fa, somary mahagaga, ny mety ho lahatsoratra ho voafafa dia tsy misy ifandraisany ny na dia mitsikera ny fanjakana na manohana ny fanjakana.
Sary 2.3: nanatsotra schematic fa ny fomba ampiasaina ao amin'ny King, Pan, and Roberts (2013) ny estimating ny fihetseham-po ny 11 tapitrisa haino aman-jery sosialy Shinoa lahatsoratra. Voalohany, tao amin'ny dingana antsoina hoe matetika mialoha ny fanodinana, ny mpikaroka niova fo ny haino aman-jery sosialy tsimandoa ho any amin'ny antontan-taratasy-teny hoe teraka (jereo ny Grimmer and Stewart (2013) Raha mila fanazavana fanampiny). Faharoa, ny mpikaroka tànan'ny-kolaka izany ny fihetseham-po ny kely santionan'ny ny lahatsoratra. Fahatelo, ny mpikaroka iray nampiofana modely fianarana nanara-maso ny fihetseham-po ny nanasokajy ny lahatsoratra. Fahefatra, ny mpikaroka nampiasa ny nanara-maso modely fianarana mba Tombanan'ny ny fihetseham-po rehetra ny lahatsoratra. Jereo ny King, Pan, and Roberts (2013) , Fanazavana Fanampiny B ho an'ny famaritana amin'ny antsipirihany kokoa.
Tamin'ny farany, Mpanjaka sy ny mpiara-miasa aminy ihany no nahita fa telo karazany ny tolana dia tsy tapaka voasivana: sary vetaveta, fitsikerana ny mpanivana, ary izay nanao asa iraisana mety (izany hoe, ny mety mitarika ho goavana hetsi-panoherana). Amin'ny fandinihana ny goavana maro ny lahatsoratra izay voafafa sy lahatsoratra izay tsy voafafa, Mpanjaka sy ny mpiara-miasa dia afaka hianatra ny fomba miasa fotsiny ny sivana amin'ny alalan'ny fijerena sy manisa. Ao amin'ny fikarohana tatỳ aoriana, niditra an-tsehatra izy ireo raha ny marina mivantana ho any amin'ny haino aman-jery sosialy Shinoa tontolo iainana amin'ny alalan'ny famoronana lahatsoratra amin'ny hafa amin'ny fomba votoaty sy ny famarana izay mahazo voasivana (King, Pan, and Roberts 2014) . Ho hitantsika bebe kokoa momba fanandramana fomba tao amin'ny Toko faha 4. Ankoatra izany, tandindon'izay ny foto-kevitra izay hitranga mandritra ny boky, ireo miseho-toetra inference olana-izay indraindray mety ho voavaha amin'ny nanara-maso ny fianarana-hiverina avy ho tena fahita eo amin'ny fiaraha-monina fikarohana ao amin'ny Hafanàm-po an taona. Ho hitanao sary tena mitovy ny isa 2.3 ao amin'ny toko faha-3 (Fametraham-panontaniana) sy 5 (Mamorona faobe fiaraha-miasa); dia iray amin'ireo hevitra vitsivitsy izay hita ao amin'ny toko maro.
Telo ireo ohatra-ny miasa fitondran-tena ny mpamily fiarakaretsaka ao New York, fisakaizana fiforonan'ny ny mpianatra, sy ny media sosialy ny sivana fitondran-tena ny governemanta Shinoa-mampiseho fa somary tsotra ny observational Ny fisiana ara-tahirin-kevitra dia afaka manampy ny mpikaroka mba hitsapana teorika filazana mialoha. Amin'ny toe-javatra sasany, angon-drakitra lehibe mahatonga anao ho afaka hanao izany Ny fisiana ara-somary mivantana (toy ny nitranga tamin'i New York Taxis). Amin'ny toe-javatra hafa, ny mpikaroka dia tokony hanangona ny observational tahirin-kevitra (toy ny tamin'ny raharaha ny sivana Shinoa); hiatrika incompleteness amin'ny alalan'ny tahirin-kevitra Nampitambatra niara (toy ny ao amin'ny raharaha ny tambajotra evolisiona); na manao ny sasany endriky ny miseho-toetra inference (toy ny ao amin'ny raharaha ny sivana Shinoa). Rehefa Manantena aho fa ireo maneho ohatra, ny mpikaroka izay afaka manontany fanontaniana mahaliana, lehibe mihazona fampanantenana lehibe.